Ny hanorina io Fanjakan'Andriamanitra io no hatongavan'ny Mesia: hampanalavitra antsika amin'ny ratsy hahazoana ny atao hoe "Famonjena".
Tsy hoe te hahafantatra ny maha-Mesia Azy, ilay ho tonga, fotsiny eto i Joany Batista, maniraka ny mpianany ho any amin'i Kristy, manotany hoe: "Ianao ve no ilay ho avy?" fa te hampahafantatra sy hanoro koa izy fa efa eo anivontsika Andriamanitra, miara-monina amintsika amin'ny alalan'ny Zanany. Fa io Zanany io no hanafaka ao am-pon'ny olona ireo aretim-panahy, hatongavan'ny Fanjakan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao, hizorany eo amin'ny fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra indray dia:
ny fahajambana ara-panahy tsy ahitan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra;
ny kilema vokatry ny fahotana ka mahatonga azy tsy handeha araka an'Andriamanitra, hampanjaka ny fitiavana sy ny fahamarinana;
ny hanokatra ny sofina mba hihainoana an'Andriamanitra sy ny antsoantson'ireo madinika miantso vonjy esty sy eroa ary ny fahafatesan'ny "conscience" na ny feon'ny fieritreretana mba hanaovany ny tsara sy izay mahamendrika azy eo anatrehan'Andriamanitra.
Isika olombelona tsirairay no hatongavan'ilay Mesia, isika marary no mila Azy mpanasitrana. Fa mba hahalavorary sy hahatanteraka ao amin'ny tsirairay io asa sy iraka ahatongavan'ny Mesia io anefa, dia mila maka tahaka an'i Joany Batista isika: handresy ny tahotra sy ny tsy fahombiazana mba hatoky ny herin'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Tsy ho mpanara-drenirano, toy ny volotara ahetsiketsiky ny rivotra, fa hiorina mafy amin'ny finoana ary tsy hifaninana amin'izay manodoka na ny fisehoana ivelany fa hitafy ny fahatsorana sy fanetren-tena. Fa izany indrindra no maha lehibe, amin'izay natera-behivavy, an'i Joany Batista teo anatrehan'Andriamanitra.